VaBennett Vanoti Kugara muZimbabwe neZanu PF Zvaramba
Mubati wehomwe mubato reMDC, Senator Roy Bennett, vanoti panguva ino vave kumbodzokerazve muhupoteri nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
VaBennett vakamboenda muhupoteri muSouth Africa muna 2006 apo vaipomerwa mhosva yekuda kubvisa nechisimba mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Pavakadzoka munyika muna 2009 kuti vagadzwe semutevedzeri wegurukota rezvekurima muhurumende yemushandira pamwe, VaBennett vakabva vasungwa nemapurisa. Asi dare repamusoro reHigh Court rakapa mutongo wekuti pakanga pasina humbowo hwakasimba hwaisungira VaBennett nemhosva dzavaipomerwa.
Asi hurumende, kuburikidza nemuchuchisi mukuru, yakabva yapikisa mutongo uyu mudare repamusoro soro reSupreme Court.
Mutongi wedare reHigh Court, VaChinembiri Bhunu, vakakwirawo kumatare vachiti vanoda kuripwa mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora kubva kuna VaBennett vachiti vakasvibisa zita ravo pavakati vatongi vematare vane maoko akasviba, nokudaro havakwanise kupa mutongo wechokwadi unorerutsira ivo VaBennett.
VaBennett vanonzi vakaudza bepanhau reGurdian rekuBritain kuti havana chivimbo nevatongi vematare munyika sezvo vaine maoko akasviba nekuti vakapihwa minda neZanu-PF iyo iri kuvashungurudza.
VaBhunu, avo vaitonga nyaya yaVaBennett, mushure mekupa mutongo wekuti hapana mhosva yavakaona panyaya yaipomerwa VaBennett, vakabva vaenda kudare reHigh Court, vachida kuripwa naVaBennett, vachiti vakasvibiswa zita ravo.
Pari zvino mapurisa ari kunziwo ari kuda kubvunzurudza VaBennett nemhosva yavari kupomerwa naVaBhunu.
Gweta raVaBhunu, VaGeorge Chikumbirike, vanoti nyaya yavo haineyi nezvematongerwo enyika.
Hurumende yakatanga kunetsana naVaBennett payakatanga chirongwa chekubvutira vachena mapurazi avo. VaBennett vakabvutirwa purazi ravo reCharleswood kuChimanimani, kunyange hazvo paine mitongo yematare yakawanda inoti purazi iri rakatonrwa zvisiri pamutemo.
VaBennett vakanetsana mudare reparamende paikurukurwa nyaya dzeminda naVaPatrick Chinamasa, pamwe naVaDidymus Mutasa, vakapedzisira vasunda VaChinamasa, ndokuwira pasi.
Komiti yedare reparamende yakagadzwa kuti itonge nyaya yaVaBennett yakavatongera kugara mujeri muna 2004. Kunyange hazvo komiti iyi yaive nenhengo dzeMDC, nhengo idzi dzaive shoma izvo zvakapa kuti Zanu PF ikwanise kupa mutongo wakaomarara.
VaBennett, avo vanozivikanwa nevatsigiri vebato ravo nekuti Pachedu, inhengo yeMDC inoremekedzwa zvikuru, uye vakamboita sachigaro weMDC kuManicaland.
Hurukuro naVaGeorge Chikumbirike